Sida loo dhageysto Beats 1 qalabka leh iOS 6, iOS 7 iyo Android | Wararka IPhone
Sida loo dhageysto Beats 1 oo ku saabsan iOS 6, iOS 7 iyo aaladaha Android
Qolka Ignatius | | Android, macruufka 6, macruufka 7
macruufka 8.4 wuxuu noo keenay Apple Music oo ah nolasha cusub, Adeegga muusigga ee qulqulaya ee Apple ee ku dhex jira barnaamijka Muusikada. Laakiin marka lagu daro adeegga muusigga qulqulka ah, waxay sidoo kale na siinaysaa adeeg raadiye halkaas oo isticmaaleyaashu aysan haysan ikhtiyaarro is-dhexgal oo suurtagal ah, illaa iyo aan la xiriirno iyaga si ay ugu ciyaaraan heesta aan rabno.
Xilligan Apple Music waxaa loo heli karaa oo keliya qalabka macruufka ee leh nooca ugu dambeeya ee 8.4 lagu rakibay. Laakiin dhowr bilood gudahood, bisha Oktoobar ee soo socota, Apple waxay bilaabi doontaa codsigeeda u gaarka ah ee Android, laga yaabee sidoo kale Windows Phone, si ay isugu daydo inay la xiriirto tiro badan oo isticmaaleyaal ah (haddii shaqooyin kor u qaaday madaxiisa) in kasta oo suuqan suuqyadu uusan lahayn lacag la'aan muddo saddex bilood ah oo tijaabo ah.
Waad ku mahadsantahay isticmaale Benji R, oo guuleystay hel URL khafiif ah oo ay adeegsatay Apple si uu u baahiyo raadiyaha Beats 1, dadka isticmaala barnaamijyada kale, sida Android, iyo waliba dadka isticmaala aaladaha ay ku rakiban yihiin macruufka 6 ama iOS 7, waxay dhageysan karaan idaacadan iyaga oo aan ku xirneyn wax dalab ah qalabkooda. URL-kan ayaa noo ogolaanaya inaan dhagaysanno muusig sidoo kale PC-ga ama Mac-yada iyadoo aan haysan noocii ugu dambeeyay ee iTunes.
Si aad u awoodo inaad dhagaysato Beats 1 Radio waa inaan booqannaa xiriirka soo socda irumble.com/beats1/ oo guji badhanka ciyaarta. Waxaan ku tijaabiyay adeeggan iPhone 4, oo leh iOS 7 (nooca ugu dambeeya ee qalabkani helay) iyo Loo maqalku wuxuu ku sii jiri doonaa asalka inkasta oo uu dansado shaashadda oo uu furo barnaamijyo kale. Hawlgalka iyo sidoo kale tayada codka waa wax la aqbali karo. Waxyaabaha kale waa nooca muusikada ay sii daayaan, maadaama aysan waxba ka qorneyn dhadhanka. URL-kani waxay u egtahay inuu Apple xannibayo si looga ilaaliyo adeegsadayaasha kale inay adeegsadaan adeegga, sidaa darteed way joojin kartaa shaqada waqti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Sida loo dhageysto Beats 1 oo ku saabsan iOS 6, iOS 7 iyo aaladaha Android
mar dambe ma shaqeyso, websaydhka laftiisu wuxuu kuu sheegayaa in tufaaxdu horeba uga hortagtay.
Waxay u shaqeysaa si qumman, laakiin waqti dheer kuma qaadan doonaan inay damiyaan qasabadda.
Liiska xayeysiisyada la jaan qaada macruufka 8.4
Miyaadan isku dayin inaad daawato fiidiyoow ah 60 fps oo ku jira barnaamijka YouTube-ka wali?